UKUPHILA KWENKQUBO: YINTONI IMIBUZO EYIQHELEKILEYO KUBANTU ABANTU -I-Element Society
KUNYE NEMIBUZO: YINTONI IMIBUZO YOKUBA NABANTU
Matshi 19, 2018
Eyona nto ibangelwa yizindaba zaseBrithani, lixesha lokugxotha iinkolelo eziphathelele 'abatsha abafayo' ukuba bafumane into ebalulekileyo kubo kunye nento abayenzayo ngenxa yoko. Joyina ipaneli yoNyaka we-12 abaphumelele kwinkqubo yokuxhotyiswa kolutsha ku-UK, iNkonzo kaZwelonke yeNkonzo (NCS) kwingxoxo. Yiva iingcamango zabo malunga nezihloko eziphakathi kolwazi, uluntu, amaphupha kunye neenqweno, abeendaba, abashukumisayo, inkululeko kunye nokuvukela.
I-Element yokuzithandela i-Cheyenne iye yamenywa ukuba ixhase iNCST kwiNgqungquthela yokuThengiswa koLutsha ngoLwesine, ngoMatshi 22, 2018. I-Cheyenne iboniswe njengenye yeengxelo zecala kwi-NCS Youth Report eqaliswe kwiNkomfa kaDisemba. I-Cheyenne iya kuhlala kwiphaneli kunye nabanye abaNcinci beGrds and Graduate Manager uJames Canvin kwisiganeko seveki ezayo eLondon.